Iyo yekuvandudza nzira yekufambisa mune ramangwana.
Conveyor ndeimwe yeakanyanya mashandiro maturusi emabhizimusi emazuva ano, michina yekushandisa uye michina, ndiyo hwaro hwesangano rakaringana rekugadzira kwakawanda uye michina yekuyerera maitiro. Kune echitatu bato logistics emabhizinesi, iyo yekuendesa ndiyo yekushandisa uye yehunyanzvi hwaro hwekuronga ...
1. Kusakwana kwebhanhire kukaka Kana bhanhire risina kukakavara kwakakwana, hakuzove nekukwikwidza kwakaringana kwekumanikidza pakati penzvimbo yekutyaira uye bhanhire, uye harizokwanise kukweva bhanhire uye kutakura kufamba. Iko kunetsekana kwechigadzirwa chebhanhire rekutakurisa kazhinji kunosanganisira screw tension, hydraulic ...
Iko kutsunga kwekumhanya kwakakosha kwazvo kune dhizaini yebhanhire rekutakura, rinoenderana neuwandu hwekufambisa uye mutengo. Kuwedzera bhanhire kumhanya kwebhandi rinotakura kunogona kuvandudza kugona kwekuburitsa. Pasi pemamiriro akafanana ekutakura, diki bandwidth inogona kushandiswa, uye iyo l ...